SIMATIC MICRO-DRIVE drive system - Technical data - Industry Support Siemens
SIMATIC MICRO-DRIVE drive system (11)
Safety extra-low voltage converter (11)
Low voltage converters (2482)
Medium voltage converters (0)
Geared motors (6)
Selection and engineering tools (7)
Supplementary components (1670)
Automation Technology (124123)
Building Technologies (18971)
Technical data F-TM StepDrive ST
SIMATIC F-TM StepDrive ST, drive controller for stepper motors in the safety extra low voltage range, 24 to 48 V DC power supply of the drive, output current 5 A, for SIMATIC ET 200SP, STO hardwired
Technical data F-TM ServoDrive ST
SIMATIC F-TM ServoDrive ST, drive controller for servo drives in the safety extra low voltage range, 24 to 48 V DC power supply of the drive, output current 5 A, for SIMATIC ET 200SP, with brake chopper, STO hardwired
Technical data F-TM ServoDrive HF
SIMATIC F-TM ServoDrive HF, drive controller for servo and stepper motors in safety low-voltage area, 24 to 48 V DC power supply of the drive, rated current 5A, for SIMATIC ET 200SP, STO hardwired
Technical data SIMATIC MICRO-DRIVE PDC1000-V1 boxed
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC1000, drive controller for servo drives in the extra low voltage range, 24 up to 48 V CS power supply of the operating mechanism, motor output max. 1000 W
Technical data SIMATIC MICRO-DRIVE PDC600F boxed
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC600F, drive controller for servo drives in the extra low voltage range, 24 up to 48 V CS power supply of the operating mechanism, motor output max. 600 W, Safety Integrated via PROFIsafe
Technical data SIMATIC MICRO-DRIVE PDC600 boxed
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC600, drive controller for servo drives in the extra low voltage range, 24 up to 48 V CS power supply of the operating mechanism, motor output max. 600 W, with hardwired STO
Technical data SIMATIC MICRO-DRIVE PDC100 boxed
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC100, drive controller for servo drives in the extra low voltage range, 24 up to 48 V CS power supply of the operating mechanism, motor output max. 100 W, with hardwired STO
Technical data SIMATIC MICRO-DRIVE PDC100F boxed
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC100F, drive controller for servo drives in the extra low voltage range, 24 up to 48 V CS power supply of the operating mechanism, motor output max. 100 W, Safety Integrated via PROFIsafe
SIMATIC MICRO-DRIVE PDC100, drive controller for servo drives in the protective extra low voltage range <(><<)>60V, 24VDC to 48VDC motor supply voltage, power range max. 100W
Technical data SIMATIC PDC Shield-Bracket-Set-70mm
SIMATIC MICRO-DRIVE SBS1-70, PDC shield bracket set with bracket length 70 mm 1 terminal clamp 20 mm, 3 terminal clamps 12 mm, 1 grounding strap
Technical data SIMATIC PDC Shield-Bracket-Set-50mm
SIMATIC MICRO-DRIVE SBS1-50, PDC shield bracket set with bracket length 50 mm 1 terminal clamp 20 mm, 2 terminal clamps 12 mm, 1 grounding strap
All information on SIMATIC MICRO-DRIVE drive system